warkii.com » Dib u dhac ku yimid shirkii dowladda dhexe & maamul goboleedyada + sababta
Dib u dhac ku yimid shirkii dowladda dhexe & maamul goboleedyada + sababta
Muqdisho (warkii.com) – Waxaa markale uu dib u dhac ku yimid shirka amniga qaranka ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, kaas oo la filayey inuu si rasmi ah maanta oo Axad ah 5-ta July uu ka furmo gudaha magaalada Muqdisho.
Shirkaan ayaa waxaa horey u iclaamiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo), balse waxaa diiday oo gabi ahaan qaadacay madaxweynahayaasha maamullada Jubbaland iyo Puntand.
Labadaan maamul ayaa tabasho ka muujiyey shirkaas iyo sida ay wax u wado dowladda, gaar ahaan hanaanka ay ku wajaheyso doorashada 2020 illaa 2021-ka.
Sidoo kale Jubbaland iyo Puntland ayaa ku eedeeyey madaxweyme Farmaajo inuu fulin waayey qodobada shirkii dhanka Internet-ka ee ahaa in la joojiyo xeerarka doorashada ee uu ka doodayo baarlamaanka, inta la’isaga imaanayo shirka amniga qaranka.
Illaa iyo hadda ma jiro hal madaxweyne maamul goboleed oo soo gaaray Muqdisho, xittaa Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo taageersan dowladda federaalka.
Dhanka kale ma jiro weli war rasmi ah oo ka soo baxay Villa Soomaaliya oo ku aadan dib u dhaca shirkan oo uu qorshuhu ahaa inuu maanta ka furmo gudaha caasimadda.
Arrintaan iyo is jiid-jiidka u dhexeeya madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada qaar ayaa dib u sii dhigi karta dadaallada loogu jiro doorashada dalka ka dhaceyso dhamaadka sanadkan, taas oo aan weli la cadeyn nooceeda iyo sida loo wajahayo.